China UL-3015 Raycus Ipg 500w 1000w Fibre Laser Cutting Machine Ho an'ny Sheet Metal Industry mpanamboatra sy mpamatsy |UNIONLASER
UL-3015 Raycus Ipg 500w 1000w Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny indostrian'ny metaly
Vidiny: 29999USD(mifandraisa amiko)
Rahoviana ianao no misafidy lovia sy fantsona fibre laser fanapahana milina?
1. Ny fitaovana fanapahana anao dia fitaovana vy isan-karazany toy ny vy tsy misy pentina, varahina, alimo, vy karbaona sns, indrindra ny fanapahana takelaka matevina.
2. Rehefa mila manapaka sodina sy fantsona, indrindra manapaka lovia.
1.Metal taratasy fibre tamin'ny laser fanapahana milina, mitondra Raycus / IPG / MAX loharanon-kery, hery 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w ho an'ny fanapahana metaly isan-karazany ny hatevin'ny 30mm1 hatramin'ny 30mm.
Raycus fibre laser loharano (IPG / MAX ho an'ny safidy)
Sakan'ny tsipika ambany indrindra
natao tany Alemaina
Igus natao tany Alemaina
Fanohanana endrika sary
Japoney Fuji Servo maotera
Oxygène, azota, rivotra
Rafitra fampangatsiahana sy fiarovana ny rano
Kojakoja azo atao
Sawtooth latabatra miasa
Tombontsoa ny lovia & fantsona fibre tamin'ny laser fanapahana milina
1. Ny lovia sy ny fantsona mitambatra tamin'ny laser fanapahana milina dia fitaovana amin'ny sehatra roa sosona ho an'ny fanapahana lovia sy ny fantsona, izay afaka mahatsapa ny avo roa heny fanapahana asa ny lovia sy ny fantsona.Ny fitaovana iray dia afaka mamita dingana maromaro, izay tsy vitan'ny hoe mampihena ny habaka amin'ny fitaovana, fa mampihena ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana.
2. Ny fanodinana tamin'ny laser dia mampiasa fitaovana sy fitaovana mitambatra, ary ny fizotran'ny fanodinana manontolo dia vita amin'ny rindrambaiko fandaharana.Mampiasa fanapahana tamin'ny laser fanodinana vokatra, ny fanapahana fizarana dia malama, ny fanapahana seam dia kely, ary ny ankapobeny workpiece dia tsy deformed, ary ny dingana manaraka dia afaka miditra mivantana.
3. Ny hafainganam-pandehan'ny lovia sy ny fantsona mitambatra tamin'ny laser fanapahana milina dia am-polony im-polo amin'ny fomba fanodinana nentim-paharazana, izay afaka mahatsapa batch fanodinana.Mandritra ny fanodinana dia azo atao amin'ny fotoana rehetra ny fiovam-po amin'ny fanapahana hazo sy ny sodina, ary mihatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
milina fanapahana tamin'ny laser fibre mavesatra
Mifono karazana fibre tamin'ny laser fanapahana milina
Toe-karena karazana tamin'ny laser fanapahana milina
teo aloha: Taratasy Metal sy Tube Laser Cutting Machine
Manaraka: Fampiroboroboana ara-toekarena tamin'ny laser fanapahana milina ho an'ny fanapahana vy taratasy
Taratasy Metal sy Tube Laser Cutting Machine